Finch mpilalao an'i Tom Hanks, dia ao amin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Apple te-hanohy hanisy famoronana kalitao amin'ny Apple TV +. Ho an'ity, nandritra ny lavanty niseho andro vitsivitsy lasa izay, dia nitaky ny zon'ilay sarimihetsika Finch nilalao an'i Tom Hanks nandresy tamin'ny Oscar izy ireo. Nandresy tamin'ny tolotra izy ireo ary noho izany dia nahazo ny zon'izy ireo handrafitra ny sarin'ity mpilalao sarimihetsika malaza ity izy amin'ny alàlan'ity sehatra ity.
Ireo tompon'andraikitra amin'ny Apple TV + dia nahavita nandresy ny lavanty noho ny zon'ilay sarimihetsika nilalao an'i Tom Hanks. Finch taloha fantatra amin'ny anarana hoe Bios dia raisina ao anatin'ny sokajy sci-fi izay nokasaina havoakan'ny Universal. Andrasana ny premiere ho an'ny faran'ny taona. Mifanindran-dàlana amin'ny vanim-potoana loka.
Ny sarimihetsika dia notarihin'i Miguel Sapochnik, izay nitarika ny fizarana sasany tamin'ny Game of Thrones, ka nahazo ny iray tamin'ireo Emmy roa azony tamin'ilay andiany. Niankina tamin'i Craig Luck sy Ivor Powell ilay script, ary mpamokatra mpiara-miasa aminy Blade Runner sy Alien no farany. Ny sary dia novokarin'i Kevin Misher, Jack Rapke, Jacqueline Levine, ary Powell. Ireo mpamokatra mpanatanteraka dia i Robert Zemeckis, Luck, Sapochnik, Andy Berman ary Adam Merims.
Any Finch ,ny lehilahy, ny robot ary ny alika dia mamorona fianakaviana tsy mino an-tsaina. Hanks dia milalao an'i Finch, injenieran'ny robotika ary iray amin'ireo sisa velona tamin'ny hetsika masoandro izay namela an'izao tontolo izao nilaozana. Ny protagonista dia nipetraka tao amin'ny bunker ambanin'ny tany nandritra ny folo taona ary nanangana tontolo iray sy zava-misy azy manokana izay zarainy amin'ny alikany, Goodyear.
Mba hikarakarana ny alika dia manaova robot (lalaovin'i Caleb Landry). Rehefa nanomboka nanao dia lavitra nankany amin'ny Tandrefana Amerikanina lao izy telo mianaka, dia niezaka naneho ny zavaboariny i Finch fifaliana sy fahagagana amin'ny dikan'ny hoe velona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Finch kintana Tom Hanks ho ao amin'ny Apple TV +
Misy ny mpanenjika tsy misy tariby manelingelina an'i CarKey. Apple dia mitady ny vahaolana